Sidee Websaydhkaaga gaabiska ahi u dhaawacayaa ganacsigaaga | Martech Zone
Sannado ka hor, waxay ahayd inaan u haaji boggayaga martigaliye cusub ka dib martigeliyahayaga hadda ayaa bilaabay inuu si tartiib tartiib ah u socdo. Qofna ma doonayo inuu beddelo shirkadaha martigelinaya… gaar ahaan qof martigelinaya websaydho badan. Tahriibku wuxuu noqon karaa geedi socod xanuun badan. Marka laga reebo kor u qaadista xawaaraha, Flywheel waxay bixisay socdaal bilaash ah sidaa darteed waxay ahayd guul-guul.
Ma aanan haysan ikhtiyaar, in kasta oo la siiyay in yar oo ka mid ah shaqada aan qabto inay tahay mid ku habboon bogagga macaamiisha kale. Uma muuqato mid aad u wanaagsan haddii degelkeygu uusan dhaqso u shuban! Taasi waxay tiri, aniga kaliya iima saameyneyso inaan ahay xirfadle ku takhasusay warshadaha, adiga sidoo kale saameyn ayey kugu leedahay.
Qiimeynta xawaaraha websaydhkaagu ma noqon karto mid muhiimadda koowaad leh laakiin taasi waa illaa iyo inta aad ka ogaanayso heerka Bounce ama heerka Abandon ee gaadhigaaga wax iibsiga. Is-beddelkaaga iyo dakhliyadaada xayeysiinta ayaa si isdaba joog ah hoos ugu dhacaya iyadoon la sameynin sameynta firfircoon ee xawaaraha degelkaaga.
Xawaarahaaga bartaadu waa isku darka martigelintaada iyo waxyaabo kale. Kahor intaadan eegin martigelinta, waa inaad dhammaystirtaa wanaajinta wax walba… ka dibna fiiri martigelintaada. Xawaaraha goobta kaliya ma saameynayso dhaqanka isticmaalaha, wuxuu saameyn hoose ku leeyahay dhowr waxyaalood:
Heerarka Beddelka - 14% dadka ku soo booqda waxay ka adeegan doonaan meel kale haddii bartaadu gaabis tahay.
Heerarka haynta - 50% dadka soo booqda ayaa sheegaya inaysan daacad u noqon doonin boggaga internetka oo waqti dheer qaadanaya.
Darajaynta Mashiinka Raadinta - Mashiinnada raadinta waxay rabaan inay ku kaxeeyaan booqdayaasha goobaha bixiya khibrad weyn oo isticmaale. Waxaa jira daraasado badan oo muujinaya in xawaaraha goobta uu yahay qodob toos ah (Google ayaa sidaas tiri) iyo sababta oo ah dadku waxay ku sii nagaadaan goob deg deg ah, waa qodob aan toos ahayn sidoo kale.
Competition - Xitaa farqiga xawaaraha goobta ee udhaxeeya adiga iyo tartame ayaa beddeli kara aragtida shirkaddooda iyo taada. Macaamiisha iyo rajada ganacsi inta badan waxay dhex maraan inta udhaxeysa goobaha wax iibiyaha… adigaa kaa dheereeya kuwa kula tartamaya?
Waa Maxay Xawaaraha Goobtu?
In kasta oo taasi u egtahay su'aal fudud… waa sida dhakhsaha badan ee websaydhkaagu u xamuul yahay actually run ahaantii maahan. Waxaa jira arrimo aad u tiro badan oo saameeya xawaaraha bogga:
Waqtiga Ugu Horeeya ee loo yaqaan (TTFB) - Tani waa sida ugu dhakhsaha badan ee websaydhkaagu markiiba uga jawaabo codsiga. Marti-geliye websaydh leh kaabayaal liita ayaa laga yaabaa inuu yeesho arrimo hagitaan gudaha ah oo laga yaabo inay ku qaadato ilbiriqsiyo si deg deg ah bartaadu uga jawaabto… waligaa ha ka fikireynin inaad si buuxda u rarto.
Fogaanta Martigaliyaha Webka - Rumayso ama ha rumaysan, masaafada jireed ee u jirta bartaada iyo arrimaha booqdahaaga. Shirkadaha badanaa waxay adeegsadaan a Network Delivery Content si looga caawiyo juqraafi ahaan kaydinta kheyraadkooda si dadka ka fog martida ay weli u leeyihiin khibrad dhakhso leh.
Dhameystirka Bogga - Boggaaga waxaa laga yaabaa inuu si buuxda u raran yahay laakiin wuxuu leeyahay hanti dheeri ah oo la raro ka dib marka bogga la dhammaystiro. Tusaale ahaan, sida caadiga ah waxaa jira a rar caajis ah Muuqaal ku saabsan nidaamyada maareynta waxyaabaha casriga ah halkaasoo sawirka aan dhab ahaan la weydiisan karin haddii uusan ku jirin gobolka la arki karo ee biraawsarku eegayo. Markuu qofku rogrogo, sawirka ayaa la codsaday oo la soo bandhigayaa.
Bixinta xoogaa lacag ah oo dheeri ah waxay sameyn kartaa farqi weyn markay tahay martigelinta websaydhka.
Barxad martigelin duug ah ayaa laga yaabaa inay ku shaqeyso adeegyo duug ah iyo kaabayaasha wadada oo aan waligood kor loo qaadin. Maaddaama tiknoolajiyadaha cusubi u baahan yihiin ilo dheeri ah, bartaada ayaa si tartiib tartiib ah oo tartiib tartiib ah ugu noqoneeysa qalabkooda duugoobay.
Martigelintaada waxaa laga yaabaa in lagu wadaago macaamiil aad iyo aad u tiro badan. Maaddaama macaamiisha kale ay cunaan ilaha, bartaada ayaa si tartiib tartiib ah u galeysa. Tikniyoolajiyadaha martigalinta ee casriga ah ee cusub ayaa awood u leh inay xaddidaan kheyraadka bog kasta ama koonto si aan cid kale saameyn kuugu yeelan.
Tikniyoolajiyadaha cusub ee martigelinta badanaa waxay ku daraan kaabayaasha keydinta iyo shabakadaha gudbinta waxyaabaha.
Aynu xisaabta qabanno. Waxaad ku bixineysaa $ 8 bishii degel raqiis ah oo qofka kula tartamaya wuxuu bixinayaa $ 100. Waxaad haysataa 1000 macmiil ah oo kula jooga $ 300 muddada sanadka oo dhan. Sababtoo ah boggaaga ayaa gaabis ah, waxaad lumineysaa 14% booqdayaashaada macmiilkaaga.
Waxaad aaminsantahay inaad keydinaysid $ 92 bishiiba, an keydka sanadlaha ah $ 1,104. Woohoo! Laakiin dhab ahaan, waxaad lumineysaa 140 macmiil x $ 300 midkiiba… sidaas waxaad lumisay $ 42,000 ganacsi si aad u keydiso waxoogaa lacag ah oo ku jira websaydhkaaga.
Hoog! Dadweynow… ha ku dhaafin martigelinta websaydhka!
WebiteSetup ayaa isku soo koobay xogtan macluumaad, Sidee Websaydhkaaga gaabiska ahi ugu gubtaa god ku jira jeebkaaga, si aad u siiso kooxdaada xaqiiqooyinka loo baahan yahay si loogu wareejiyo hay'addaada kaabayaal dhaqso ah ama loo shaqaaleysiiyo koox xirfadlayaal ah oo kaa caawin kara hagaajinta bartaada hadda. Maaha inay ahaato dadaal qaali ah. Xaqiiqdii, waxaan dhab ahaantii lacag ku keydinay martidayada cusub!
Tags: Ka tagida gaadhigahagaajinta ecommercewaxqabadka ecommerceRaadinta xaqiiqooyinkahagaajinta goobtaWaxqabadka Goobtaxawaaraha goobtagaabis martigelindegel gaabis ahxawaaraha websaydhka gaabiska ahmarkii ugu horeysay bytexawaaraha webka
Maxay Tahay Sababta Ay U Joogaan 542 Mooska Joogtada Ah Amazon